Tononkalom-behivavy Iray Ho An’ny Mpitsoa-ponenana Syriana Namoy Ny Ainy Niampita Ny Mediteranea — Anisan’izany Ny Anadahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2015 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, Italiano, Español, 日本語, عربي, Français, English
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jared Goyette sy Steven Davy ho an'ny The World ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 19 Novambra, 2015, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
23 taona i Žena Agha, mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Harvard ary nanao tononkalo mifandraika amin'ny krizin'ny mpitsoa-ponenana amin'ny fomba tsy vitan'ny ankamaroan'ny namany.
Herintaona lasa tamin'ny andro nandraketany ity lahatsary ity – tamin'ny 16 Novambra – nahitana an'i Amjad, havany nonina tao Damaskosy, namoy ny ainy tao anatin'ny sambon'ny mpifindra monina izay nilentika teny am-pandehanana niala avy ao Torkia ho any Gresy.
Tao anatin'ny eritreriny i Amjad ary nanoratra ity sangan'asa ity izy, “Ngeza ny Ranomasina” izay nasehony nandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ny krizin'ny mpitsoa-ponenana nokarakarain'ny PRI tao amin'ny sekoly Harvard Kennedy.
“Mino aho fa zava-dehibe ny manatontosa ity hetsika sy resaka ity ankehitriny satria tahaka ny mivaha tsikelikely ny tady mihazona antsika hiaraka”, hoy i Agha. “Maminavina mialoha ny fotoana maizina aho, indrindra indrindra i Paris mifandray amin'ny mpitsoa-ponenana, ary ny marefo indrindra ao amin'ny fiaraha-monina nahazo tsiny, tsy nahy, na noho izay natao, ary tsy manam-peo hamaliana izy ireo.”
Manantena izy fa hahatonga ny mpihaino handinika lalindalina kokoa momba ny krizin'ny mpitsoa-ponenana ny tononkalo, ny ifandraisan'izy ireo amin'izany, ary angamba hahatonga azy ireo hanao zavatra.
“Raha afaka mampisy izany eo amin'ny olona aho, ​​hahatonga azy ireo handinika ny faharefon'ny [ ny mpitsoa-ponenana], sy tena hanampy azy ireo handray izany dingana izany, mankany amin'ny tsy fantatra sady manalavitra izay rehetra fantany”, hoy izy. “Raha afaka mampisy tetezana fangorahana ho azy ireo, amin'ny alalan'ny tononkalo aho, dia hiteraka tantaram-pahombiazana mahery vaika izany.”
Palestiniana ara-poko ny fianakaviany avy amin'ny rainy ary nanorim-ponenana tany Damaskosy taorian'ny taona 1967. Nandao an'i Damaskosy ny rainy mba hampianatra any Alzeria, ary nifindra monina tany Londra tamin'ny taona 70 miaraka amin'ny vola 200 farantsa frantsay tao am-paosy. “Nanomboka tamin'ny orinasam-pandefasana an-tsambo mifantoka amin'ny fandefasana entana mankany Afovoany Atsinanana ny izy. Nijanona tao Syria ny iray tampò aminy, rahalahiny roa sy anabaviny iray. Nandritra ny famangiana fianakaviana no nahafantaran'i Agha izany nihalehibe tany London an'i Amjad, zanaky ny iray tampo amin'ny rainy..
Nilaza taminy ny rainy fa niezaka namakivaky ny ranomasina Mediteranea i Amjad. Nalahelo izy raha nahita fa namoy ny ainy i Amjad, tahaka ireo olona maro hafa rendrika.
“Tamin'ny taon-dasa, nitomany tao amin'ny efitra fandroana nandritra ny fotoana ela aho. Ary tamin'ity taona ity, nisento lalina aho taorian'ny fahavitan’ [ny tononkalo] farany, ary nieritreritra aho hoe: Ity aho manome ny ampahako ho azy, sy ho an'ny hafa rehetra, ka tamin'ny fomba maro dia nisy fiantraikany tamiko izany nandritra ny nanoratana azy, nisy fiantraikany tamiko izany nandritra ny fiantsana [tononkalo] ampahibemaso. Niteraka alahelo be tamiko izany rehefa noeritreretina sady nampahery ihany koa satria raha tsy misy ny tolon'izy ireo, dia tsy toy izao aho. Ary raha tsy nisy ny tantarany, dia tsy nahavita niezaka sy nizara aho. Ary fampahatsiahivana isan'andro izany fa manana tombondahiny aho ary tsy maintsy mampiasa izany. “
‘Iray amin'ireo maro izy. Manana anarana sy endrika, tahaka ireo an-jatony raha tsy an'arivony hafa, saingy tsy nanatsara azy kokoa izany, ka dia ao an'eritreritro izy, ao an'eritreritro avokoa izy rehetra, saingy ny eritreritra koa fa mety ho toa azy ireo mora foana aho. Tsy misy fahasamihafana na ny rà na ny fototarazo eo aminay ary raha mila misisika amin'ny tsy rariny amin'izany aho, dia hahatonga ahy ho lasa adala izany, ka mba tsy hitrangan'izany, manoratra azy ity aho ary miantsa azy.”
Ity ny tononkalo momba izany atao hoe mpitsoa-ponenana izany :